Sawiro: Wiil 19 jir ah oo arday ku dhow 20 ku laayay Dugsi ku yaalla Dalka Mareykanka - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Wiil 19 jir ah oo arday ku dhow 20 ku laayay...
Sawiro: Wiil 19 jir ah oo arday ku dhow 20 ku laayay Dugsi ku yaalla Dalka Mareykanka
Florida (Caasimadda Online) _ Ugu yaraan 17-qof ayaa dhimatay kadib markii nin 19 sano jir ah uu rasaas ku furay Dugsi sare oo ku yaalla magaalada Parkland ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka sida ay xaqiijiyeen ciidamada Boliiska.
Wiilkan loo qabtay inuu geystay falkaasi ayaa lagu magacaabaa Nikolas Cruz ,kaas oo horay uga mid ahaa ardayda Dugsigaasi, ka hor inta aan laga eryin. Wuxuuna adeegsaday xeelad ah inuu shido qalabka digniinta, kadibna markii ay ardayda kasoo wada yaaceen fasaladda uu rasaas ku bilaabay.
Shilkaan ayaa ah kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca goob wax barasho marka laga yimaado weerarakii lagu dilay 26-ruux ee ka dhacay Dugsi ku yiillay gobolka Connecticut sanadkii 2012-kii.
Wiilkaasi ka dambeeyay dilka dadkaasi waxaa lagu qabtay deegaanka Coral Springs, daaweyn ka dib waxaa la dhigay xabsiga Boliiska. Madaxweyne Trump ayaa cambaareeyay falka toogashada ah.